Onye nrụpụta na EPR-60 ​​kacha mma | CSJ
0 ~ 7000Gauss na -agbanwe agbanwe oge niile
Ọnọdụ jụrụ oyi:
K 500 n'arọ
Mmetụta resonance elektrọnọnị (EPR) bụ ụdị teknụzụ resonance magnetik sitere na oge ndọta nke elektrọn na -akwụghị ụgwọ. Enwere ike iji ya chọpụta nke ọma na ọnụ ọgụgụ elektrọn na -akwụghị ụgwọ nke dị na atọm ma ọ bụ molekul nke ihe dị iche iche, wee nyochaa ha. Njirimara nhazi nke gburugburu. Maka radicals n'efu, oge ndọta orbital enweghị mmetụta ọ bụla, na ọtụtụ oge ndọta (karịa 99%) na -enye aka na ntụgharị elektrọn, yabụ a na -akpọkwa resonance elektrọnik "resonance elektrọn" (ESR).
Onye mbụ onye physicist Soviet bụ E · K · Zavois chọpụtara na mbụ resonance elektrọnọn na 1944 site na MnCl2, CuCl2 na nnu paramagnetic ndị ọzọ. Ndị na -ahụ maka physics buru ụzọ jiri usoro a mụọ usoro elektrọnik, usoro kristal, oge dipole, na usoro molekul nke ụfọdụ atọm dị mgbagwoju anya. Dabere na nsonaazụ elektrọnọnụ paramagnetic resonance elele, ndị na -eme kemịkalụ kọwapụtara njikọ kemịkal na nkesa njupụta elektrọn na ogige ndị dị mgbagwoju anya, yana ọtụtụ nsogbu metụtara usoro mmeghachi omume. American B. Commoner et al. wepụtara teknụzụ resonance eletrọnịkị nke paramagnetic n'ọhịa bayoloji na nke mbụ na 1954. Ha hụrụ ịdị adị nke radicals n'efu na ụfọdụ ihe ọkụkụ na anụmanụ. Kemgbe afọ 1960, n'ihi nkwalite ngwa ngwa na teknụzụ na -aga n'ihu, ejirila teknụzụ resonance elektrọnik elektrọnik, semiconductor, kemịkalụ kemịkalụ, kemịkalụ radieshon, injinị kemịkalụ, kemịkal mmiri, ihe mkpali, bayoloji, na bayoloji. Ejirila ya n'ọtụtụ ebe dịka kemistri, ọgwụ, sayensị gburugburu ebe obibi, na atụmanya ala.
A na -ejikarị ya maka ịchọpụta radicals free na paramagnetic metal ions na ogige ha iji nweta ozi nhazi na ihe mejupụtara. Dịka ọmụmaatụ: tụọ ike ndọta nke paramagnets, ọmụmụ ihe nkiri dị larịị magnetik, na-eduzi elektrọn na ọla ma ọ bụ semiconductor, ụfọdụ ntụpọ lattice mpaghara na ihe siri ike, mmebi radieshon na nnyefe radieshon, radieshon ultraviolet dị mkpụmkpụ na-adị ndụ ihe ndị dị ndụ. usoro mmeghachi omume, omume nke radicals free na corrosion, usoro nke ogige dị na kemịkalụ nhazi, ike saturation nke ntutu ntutu mmadụ, njikọ dị n'etiti radicals na sel sel na ọrịa, yana usoro mmetọ gburugburu ebe obibi.
Oghere ndọta 1 ： 0 ~ 7000Gauss na -agbanwe agbanwe oge niile
2, Oghere osisi ogologo ： 60mm
3, Usoro jụrụ oyi cooling mmiri jụrụ oyi
4, Ibu oke ： <500kg
Enwere ike ịhazi ya dịka mkpa ndị ahịa si dị
Nke gara aga: EPR-15
0.5T Obere BRE MRI
0.7T Igwe Ọdịdị Superconducting mepere emepe